🥇 Uhlelo lwezifundo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 228
Ividiyo yohlelo lwezifundo
Oda uhlelo lwezifundo
Misa ukufuna uhlelo oluhle lwezifundo zakho! Itholakala lapha manje, kuleli khasi. Uhlelo lokubalwa kwezifundo ezivela e-USU luzosiza ukwenza inhlangano yakho ishintshe, luzokuvumela ukuthi ubheke imisebenzi eqhubekayo nezindlela zokuphatha ibhizinisi lakho. Futhi-ke, kuzonikeza amathuba amasha wokulawula okukhiqizayo ekuphathweni kwakho. Okokuqala, uhlelo lwethu lwezifundo lwenziwa ngabantu oluzosetshenziswa ngabantu. Sithethelele i-tautology, kepha kufanelekile lapha, ngoba okugcizelelwa kakhulu esintwini. Ukubonga kwethu kuphela kubantu abazinikele ekufundiseni abanye kusishukumisele ekwakheni uhlelo oluyingqayizivele, okuyinjongo eyodwa ukwenza lula ukusebenza kwakho kanzima nsuku zonke. Kepha kufanelekile ukusho ukuthi le njongo enhle inamabhonasi amaningi amnandi nemisebenzi emihle edingeka kakhulu manje. Ngenyanga yokuqala uzomangala ukuthi lolu hlelo lwezifundo lusebenza ngempumelelo kangakanani nokuthi lusiza kangakanani ukuphathwa kwebhizinisi lakho. Futhi kukunika ugqozi olungakanani, njengomphathi, nabasebenzi ngasikhathi sinye! Ukuhlola ukuthi inabe kangakanani, sincoma ukwehla ngezansi kwaleli khasi bese uchofoza isixhumanisi esisebenzayo esiya kunguqulo yedemo yohlelo lwezifundo. Iveza izici eziyinhloko ngokuningiliziwe, futhi intengo yombuzo ayilutho. Ukufakwa kwenguqulo yedemo yohlelo lokulawula kumahhala ngokuphelele. Uma usebenzisa ukusebenza kafushane, singathanda ukusho ukuthi imisebenzi isatshalaliswa kubasebenzisi ngumlawuli. Njengoba usuvele waqagela, umphathi ungumphathi noma iphini lakhe noma, mhlawumbe, i-accountant noma omunye umuntu omethembayo ukufinyelela kwakhe okuqinisekisiwe ekuqaleni kuhlelo lwethu.
Abasebenzisi abangena ohlelweni babheka kuqala isithombe esivamile, kepha izinga lokufinyelela kwabo lizihlukanisa ngokwabo. Isibonelo, umphathi akanayo imingcele yemibuzo ngaphakathi kohlelo lwabahambisi: angabuka umlando wokuqalisa egameni labasebenzisi, imisebenzi eyenziwe, imibiko efingqiwe, izibalo nezibalo, kepha ayikho yale mibuzo etholakala kumsebenzisi ojwayelekile . Isoftware yokuphatha izifundo nokugcina amarekhodi yakha isheduli ye-elekthronikhi futhi iqinisekisa ukusetshenziswa okunengqondo kwezikhungo zemfundo zesikhungo sakho. Futhi, iphephabhuku lababekhona lizothola indawo yalo ohlelweni lwezifundo. Ukugcina isilinganiso njalo kuyisikhuthazo esikhulu kubasebenzi, futhi uma futhi kuvulekile, kuyabakhuthaza nsuku zonke. Uma usufake uhlelo lokuphatha olubaqhathanisa ngamapharamitha ahlukahlukene futhi lubonise imiphumela ngenani lezinombolo, akekho uthisha oqhubeka engenandaba, futhi-ke uzama ukuncintisana, akhuphukele phezulu ezikhundleni eziholayo. Futhi uma izikhundla eziholayo ziklonyeliswa ngenkuthalo ngamabhonasi emali, uhlelo lwezifundo olunamanani othisha alo ayigugu luzobulala izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa: luzokhuthaza abasebenzi ukuthi baphumelele futhi luzokhetha ngokuzimela umqashwa ongcono futhi lumnikeze ibhonasi efanelekile. Futhi yebo, ukubalwa kwezimali zemiholo nakho kuyinjongo yohlelo lwezifundo. Ingabe kuhle ukuba nesisebenzi esizimele kangaka, esenza isabelo sengonyama seqembu lonke? Ngemuva kwalokho udinga ukufaka lolu hlelo olubalulekile kudivayisi yakho!
Uhlobo olusha lohlelo likuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso ukuboniswa kolwazi etafuleni. Ake sicabangele isibonelo semininingwane yamakhasimende. Kunenkambu ethile yombhalo ote. Inolwazi olubalulekile okufanele lubonakale kumsebenzisi, kepha lubanzi impela. Phambilini, inkambu uqobo lwayo bekufanele ilulwe ngandlela thile, obekungasebenzi kahle. Enguqulweni entsha, ungalawula ukubekwa kwezinkambu etafuleni hhayi endizeni evundlile kuphela, kodwa nakuleyo emi mpo! Konke okudingeka ukwenze ukubamba umugqa isikhombisi segundane bese usihudulela endaweni efanele noma vele wandise ukuphakama kwanoma iyiphi insimu. Manje usungakwazi ukwenza ngokwezifiso itafula ngalinye ukuze uvumelane nezidingo zakho. Amaheda angabekwa emigqeni eminingi, futhi ukuphakama kwezinkambu ngokwazo kungashintshwa ukugcizelela izinto ezidingekayo. Ukuthuthukiswa kwesoftware okwengeziwe kunezela ukusebenza okusha futhi kwenza umsebenzi wakho ohlelweni ube lula futhi ukhiqize ngokwengeziwe. Ukuqoqa etafuleni ngepharamitha ethile manje kukuvumela ukuthi ubale ngokucacile amanani. Manje awusaboni kuphela inani eliphelele, kepha futhi nazo zonke izinkokhelo zesikhashana nezikweletu. Uhlelo lwezifundo alubali kuphela inani lamarekhodi, kepha futhi nenani lamaqembu. Ungahlala ubona inani lezinqubo ezihlukile kunoma isiphi isampula. Cabanga ngendaba lapho udinga ukugcwalisa izinkambu ezithile, kepha kuyaqabukela. Phambilini, bebevame ukuba yisibuko kuwe, ngoba lapho uhlela, uhlelo luye lwabakhombisa ngokuphelele, okuqede ukunakwa. Manje usungafaka lezi zinkambu zokuzikhethela eqenjini elilodwa bese uzifihla ngokuchofoza okukodwa. Isibonelo, nali irekhodi lokuhlela irekhodi leklayenti. Ake sithi awufuni ukubona imininingwane yokuxhumana noma isigaba esingeziwe njalo - mane uchofoze kulayini weqembu futhi uzofihlwa! Iwindi lihlangana kakhulu ngaphandle kokulahlekelwa ukusebenza. Okufanayo kungenziwa ngewindi lokusesha idatha. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe, ungavakashela iwebhusayithi yethu esemthethweni. Lapha uthola lonke ulwazi oludingekayo. Ngaphandle kwalokho, uthola ithuba eliyingqayizivele lokulanda uhlobo lwedemo lwamahhala lohlelo lwezifundo ezizokukhombisa zonke izinzuzo ezingaletha ekuphathweni kwebhizinisi lakho.
Ukubalwa kwemali kwamakilasi eqembu
accounting for enkulisa
Ukubalwa kwemali yezifundo zolimi
Ukubalwa kwemali yemfundo yasenkulisa
Ukubalwa kwezimali ukutadisha
Ukubalwa kwezimali zesikhathi sothisha
accounting ezikhungweni zemfundo
ukubalwa kwezikhungo zezingane
Ukubalwa kwezingane enkulisa
Ukubalwa kwezimali kwabafundi abakhona
ukubalwa kwezimali kokuqeqeshwa
Ukubalwa kwezimali kwesikhungo sokuqeqesha
accounting wezifundo zokuqeqesha
Izinhlelo zekhompyutha zokuziqeqesha
Uhlelo lwekhompyutha lwezifundo
Ukulawula isikhungo semfundo
Ukulawulwa komsebenzi wokufundisa
Ukudweba amathilethi wesikhathi
Ukubalwa kwezimali zemfundo
Uhlelo lokuphathwa kwezikhungo zemfundo
Inqubo yezemfundo accounting
Inqubo yokufundisa ezenzakalelayo
Ukuphathwa kwenqubo yemfundo
Isheduli yeklasi lamaqembu
Ijenali yokubala imali kwezemfundo
Ijenali yokubalwa kwezimali esikoleni
Ijenali yokubala imali yokufunda
Ijenali yokubalwa kwezifundo
Ukuhlaziywa kwenqubo yokufunda
Ukuphathwa kwesikhungo semfundo yasenkulisa
Ukuphathwa Kwesikhungo Sezingane
ukuphathwa kwezikhungo zemfundo
ukuphathwa kwenhlangano yezemfundo
ukuphathwa kwezikhungo zasenkulisa
Izinhlelo zezifundo zemfundo
Uhlelo lokubalwa kwezitshudeni
Uhlelo lokushayela isikole sokushayela
Uhlelo lwesikole sengane
Uhlelo lwezifundo lwezikhathi
Uhlelo lwesikole esiyimodeli
Uhlelo lwesikhungo sobuciko bezingane
Uhlelo lwesikhungo sokuqeqesha
Uhlelo lwezifundo zokuziqeqesha
Uhlelo lwezikhathi lwesikole
Isoftware yokubakhona kwezimali
Ukulawulwa kokufunda kwabafundi
Ukuphathwa kwezikhungo zokuqeqesha